Umhla osemthethweni weWWDC, iXiaomi AirPower kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Umhla osemthethweni weWWDC, iXiaomi AirPower kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Kule veki umhla wesiganeko se-Apple ufike ngokusesikweni, ngakumbi lowo iWWDC yale 2021. Ukuqinisekiswa komhla ngokucacileyo kuza ngexesha elibalulekileyo labasebenzisi be-Apple kuba sonke sasilinde inqaku eliphambili okanye umsitho wenyanga kaMatshi kwaye ekugqibeleni akukho nto konke konke.
I-Apple ilungiselela a Umnyhadala opheleleyo kwi-WWDC Ngokusengqiqweni oku kusixelela ukuba ukuba kuya kufuneka uqhubeke nomnye umsitho nawo uya kuba kule fomathi, ubuncinci oku kuqala konyaka. Okwangoku siqala inyanga ka-Epreli yomeleleSiza kubona ukuba yintoni enye esizisa yona kule nyanga.
Ukongeza kwisiqinisekiso esisemthethweni esivela kwi-WWDC sinezinye iindaba ezibalulekileyo kwaye namhlanje siza kushwankathela ezinye zazo njengenkcubeko rhoqo ngeCawa. Eyokuqala esifuna ukuyigxininisa ziindaba zika «Amandla omoya» thaca ngu Xiaomi. Kusashukunyiswa kakhulu isixhobo esitsha ngu Ukufana kwe-Apple's AirPower.
Enye yeendaba ezibalaseleyo ezivela kuMac yayiyi Ukufika kwenkonzo yeApple Pay eMzantsi Afrika. Ukwandiswa kwale nkonzo ibalulekileyo kuninzi lwethu kuyaqhubeka ngokuthe ngcembe kwaye kule meko Inkampani ifikelela kwiibhanki ezahlukeneyo eMzantsi Afrika.
Las Iinguqulelo ze-beta zazo zonke ii-OS Bafike ngoLwesine odlulileyo, umhla woku-1 ku-Epreli. I-Apple ayiyeki oomatshini bohlaziyo kunye Ngeli xesha bakhuphe eyesithandathu kubaphuhlisi Kunye nohlobo lwabasebenzisi ababhaliswe kwii-betas zikawonkewonke.
Ukugqiba elinye lamanani abahlalutyi abathanda kakhulu kwaye i-Apple ithumele malunga ngaphezulu kwe-100 yezigidi zee-headphone ngo-2020. Ukuthengiswa kwee-headphones kuye kwaba yinto efanelekileyo kwi-Apple kunye ne-AirPods Pro kubonakala ngathi iphezulu kuloluhlu. Ngokuqinisekileyo bayaqhubeka ngolu hlobo kulo nyaka ka-2021 okanye bayiphucule ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Umhla osemthethweni weWWDC, iXiaomi AirPower kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
I-l0vetodream ibanga ukuba iMac entsha iya kuba nkulu ngakumbi kunale ikhoyo ngoku